Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 22)
[APK] Tema Android L tsara indrindra ho an'ny Roms Cyanogenmod 11
Eto ianao manana ny apk izay, raha ny hevitro manokana, ny lohahevitra Android L tsara indrindra ho an'ny Rom mifototra amin'ny Cyanogenmod 11.
LokLok dia mamela anao handefa sary, doodle ary hafatra mivantana avy eo amin'ny efijery hidin-trano
LokLok dia mitondra bebe kokoa amin'ny karazana olona feno fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo
[APK] Ampidiro ny fampiharana LG Health manokana an'ny LG G3 amin'ny LG anao
Eto ianao dia manana ny zavatra rehetra ilainao sy ny takiana mba hihaonana hametrahana ny fampiharana LG Health an'ny LG G3 amin'ny LG G2 anay.
SoulCraft 2: League of Angels, tohiny hifanandrinana
MobileBits dia namoaka SoulCraft 2: League of Angels, tohiny izay mahafeno ny be indrindra sy tsara indrindra.
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny famantaranandro marani-tsaina: Ankehitriny Bunting
Androany tamin'ny premiere an'ny fizarana Apps ho an'ny famantaranandro marani-tsaina dia tianay ny hizara ny iray amin'ireo rindranasa vaovao indrindra ho an'ny Android Wareables.
Sintomy ny Pie Control bara fitetezana tsy mampino ho an'ny #Android
Eto ianao dia manana horonantsary iray izay anehoako anao ny fomba fisehoan'ny Pie Control ary koa ireo safidiny fikirakira lehibe.
[APK] Ahoana ny fomba hanomezana ny fijery Android L feno amin'ity lohahevitra ity (ao anatin'izany ny bara fitetezana, menus ary bara fampandrenesana)
Eto ianao manana ny apk ho fisintomana mivantana ny lohahevitra ho an'ny Cyanogenmod 11 izay hahatonga ny terminal Android ho toy ny Android L tanteraka
Ahoana ny fomba hifehezana ny YouTube amin'ny lavitra amin'ny Android
Androany izahay dia manazava ny fomba ahafahanao mampiasa YouTube amin'ny efijery hafa sy hifehezana azy amin'ny findainao Android amin'ny fomba voajanahary, na amin'ny alàlan'ny fampiharana YouTube Remote.
Fampiharana Android mahatalanjona: Andro loko fanamarihana
Color Note dia ho ahy, tsy misy isalasalana, ny fampiharana fanamarihana tsara indrindra ho an'ny Android izay azontsika alaina maimaimpoana amin'ny Play Store.
Fampihinana hisakafoanana sy hilelaka ny rantsan-tànanao: Sakafo Sinoa Androany
Manohy ny fizarana manokana anay amin'ny Android izahay momba ny fangatahana fisakafoanana hariva ary amin'ity tranga ity dia mitady zavatra hafahafa izahay. Androany ny mpihinana antsika dia ny Chinese Cuisine.
Ahoana ny fomba fampidinana ireo rakitra ampiantranoina ao amin'ny MEGA ary tsy ho faty raha manandrana
Eto ianao manana video iray izay hanazavako ny fomba fampidinana ireo rakitra nampiantranoana MEGA avy amin'ny Android fa tsy ho faty raha manandrana.
Ny olana mifandrindra amin'ny Gmail amin'ny Android
Toa nisy olana momba ny fampitambarana amin'ny Gmail hita tao amin'ny Android izay efa tadiavin'i Google vahaolana
Tadidio ny Android: Today Gallery 3D [APK]
Androany aho te hizara aminareo rehetra ilay fampiharana Gallery 3D manaitra izay hadinon'ireo terminal Android anay.
Brezila vs Colombia mivantana, manomboka ny ampahefa-dalana # Brasil14
Ireto misy vahaolana vitsivitsy hijerena mivantana an'i Brazil vs Colombia amin'ny Android-nao.
Misoratra anarana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny Disney Ball i Disney
Disney dia mandefa an'i Disney Bola amin'ny fikatsahany hanararaotra ny fotoana ananantsika, amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014.
[Lahatsary] Ny baikon'ny feo rehetra avy amin'ny OK Google
Eto ianao dia manana horonan-tsary mizaha ny baikon'ny feo Google OK amin'ny LG G2-ko
#TrucoAndroid hampavitrika ny OK OK avy amin'ny toerana rehetra
Eto aho dia mamela #TrucoAndroid hampiasana ny OK OK avy amin'ny toerana rehetra, na dia anglisy ihany aza no manan-kery.
Ahoana ny fomba hahazoana fihenam-bidy ho an'ny Burger King
Te hanana fihenam-bidy tsara indrindra an'ny Burger King ve ianao? Mila misintona ny fampiharana maimaimpoana fotsiny ianao ary manomboka mankafy.
Ny baiko rehetra amin'ny Google Now dia tokony hampiasaina amin'ny "Ok, Google"
Ny baiko am-peo Google Now rehetra dia tokony hampiasa ny baiko "Ok, Google" izay natao espaniola omaly
Fampihinana hisakafoanana sy hilelaka ny rantsan-tànanao: Androany ny zavatra andrahoiko anio
Ao amin'ny bilaoginay dia hiresaka momba ny fizarana vaovao misy rindranasa hisakafoanana sy hilelaka ny rantsan-tànanao izahay ato amin'ity bilaoginay ity. Amin'ity tranga ity dia manomboka amin'ny What I Cook Today.
Ny fampiharana Android Wear rehetra dia efa manana ny fizarany manokana ao amin'ny Play Store
Ny fampiharana Android Wear rehetra izao dia hita ao amin'ny faritra misy azy ao amin'ny Play Store
[APK] MIUI Music Player ho an'ny #Android rehetra
Eto ianao manana ny APK an'ny MIUI Music Player ho an'ny fametrahana manual amin'ny Android 4.0 na avo kokoa.
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany AppLock
AppLock dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android izay hanampy anay hiaro ireo fampiharana hafa amin'ny Android amin'ny alàlan'ny teny miafina na lamina
Deezer manavao ny fampiharana findainy miaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny feo
Deezer manavao ny fampiharana Android mba hitondra kalitao feo bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa azy
OK Google amin'ny teny espaniola navitrika tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny Google Now Launcher
Ary manana ny fiasan'ny fihainoana mavitrika OK Google amin'ny teny Espaniôla ho an'ny Google Now Launcher izahay
McDonald's dia maniry ny hanina haingana kokoa noho ny fampiharana vaovao azy
McDonald's dia nandefa programa fanamoriana fampiharana hametrahana baiko ary hanangonana izany raha vantany vao miomana amin'ny fomba haingana kokoa izy ireo.
Google Drive dia nohavaozina miaraka amin'ireo fitaovana famokarana rehetra ary izao ny endriny ankehitriny
Ny fanavaozana farany ny Google Drive sy ny fampiharana rehetra dia mahatonga ity fampiharana ity ho iray amin'ireo fitaovana famokarana tsara indrindra ho an'ny Android.
Ahoana no fiasan'ny fanaovana kopia marobe amin'ny Android miaraka amin'ny ES File Explorer
Ny fakana tahaka ny rakitra amin'ny Android amin'ny lahatahiry na lahatahiry samihafa dia azo atao noho ny ES File Explorer.
Google Play Music dia mametra ny isan'ny fitaovana nahazo alàlana avy amin'ilay kinova vaovao 5.6 [APK]
Google Play Music dia mametra hatramin'ny 10 fitaovana ekena, miaraka amin'ny telefaona dimy ahafahana mametraka azy
Valiny haingana ho an'ny PushBullet mamela anao hifehy WhatsApp amin'ny solosainao
Ireo tovolahy ao amin'ny PushBullet dia nandefa Quick Reply, serivisy ahafahanao manana WhatsApp ho an'ny PC haingana sy mora foana
Alefaso ny fihainoana mavitrika ho an'ny OK Google na dia tapaka aza ny efijery
Androany aho dia te hampianatra anao hamelana ny fihainoana mavitrika ny OK Google, na aiza na aiza Android terminal misy fiteny sy amin'ny mpandefa izay ampiasainay.
Te hahazo karama ve ianao raha te handray mailaka mivantana amin'ny efijery fanidiana anao?
Te hahazo karama ve ianao raha te handray mailaka mivantana amin'ny efijirinao? Miaraka amin'i Locky, azo atao izao ny fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android.
Castle of Illusion dia tonga amin'ny Android
Castle of Illusion, ilay voadona SEGA navoakan'ny MegaDrive, azo alaina amin'ny Android izao.
[APK] Jolla Launcher, foto-kevitra iray hafa an-trano azo andramana amin'ny Android-nao
Ity misy horonantsary misy ny asan'ny Jolla Launcher, ny tranon'ny terminal Jolla izay alefa ho an'ny Android ankehitriny.
[APK] Ny Android L Launcher ho an'ny Android 4.3 rehetra na avo kokoa
Eto ianao manana ny fisie ilaina mba hankafizanao ny Android L Launcher amin'ny Android terminal misy ny version 4.3 na avo kokoa.
Versus, fampiharana Android hanaovana fampitahana modely isan-karazany
Ny Versus dia rindranasa Android izay azo ampiasaina hananganana fampitahana eo amin'ny telefaona finday samihafa na kojakoja samihafa.
Sleep Cycle dia fampiharana famantaranandro fanairana mba hifoha amin'ny tarehy tsara kokoa
Ny Sleep Cycle dia mahazo hevitra tsara avy amin'ny Play Store ary ity no fampiharana tonga lafatra amin'ny fifohazana amin'ny maraina
Sintomy ny fampiharana Android L rehetra
XDA Forums dia iray amin'ireo mpilalao lehibe isaky ny mivoaka ny Android vaovao. Azonao atao ny misintona ny rindranasa Android L avy any
Avadiho ho POS maimaimpoana ny Smartphone na Tablet anao
Raha manana orinasa fandraisam-bahiny ianao dia azo antoka fa ho liana amin'ny fomba hamadihana ny Android ho POS maimaim-poana ianao
Sintomy ary apetraho ny kitendry Android L [ROOT] vaovao
Eto ianao manana ny fomba fametrahana ny fitendry Android L vaovao, ilay kinova vaovao an'ny rafitra fiasan'i Google izay miteraka fahatsapana.
[APK] Apetraho ny rafitra fampandrenesana Android L vaovao, Heads Up amin'ny Android rehetra
Avy eo avelako ianao hisintona mivantana ny apk an'ny Heads Up, ilay rafitra fampandrenesana Android L vaovao ho an'ny Android 4.3 na kinova hafa.
Google Slides, lasa mahaleo tena ny mpifaninana amin'i Powerpoint
Google Slides, ny fampiharana fampisehoana Google malaza dia nanjary tsy miankina amin'ny Google Docs, ankehitriny dia afaka mahita ny fampisehoana ataontsika amin'ny finday avo lenta isika.
[ZIP] [APK] Sony Track id ho an'ny Android rehetra
Eto ianao dia manana seranana id an'ny Sony Track mety ho an'ny maodely hafa amin'ny terminal Android.
Fampiharana Android mahatalanjona: Hoy News Republic
News Republic dia mpanangona vaovao na mpamaky fahana izay manome antsika fahafaha-manao betsaka sy endrika vaovao ao anaty interface tsy mampino.
[APK] Sintomy ary apetraho ny fakantsary mahatalanjona OnePlus One
Eto ianao manana ny apk ho fisintomana mivantana sy fametrahana ny fakantsary OnePlus One tsy mampino ho an'ny kinova Android 4.4.
[APK] Nokia's Z Launcher, hevitra hafa amin'ny Launcher
Eto ianao manana ny apk ho fisintomana mivantana an'ity konsep Launcher vaovao ity ho an'ny Androids-nay, ity Nokia Z Launcher ity.
TOTAL PSafe, ny fiarovana farany 360 ho an'ny Android anao
PSafe TOTAL Android dia tsy voafetra amin'ny fiarovana amin'ny viriosy, satria manolotra asa maro be izy rehetra ao anaty 8 MB.
Eto ny Slingshot an'i Facebook, efa misy ny mpifaninana amin'i Snapchat ankehitriny
Slingshot avy amin'ny Facebook, dia ilay fampiharana vaovao izay hanandrana hampifaninana an'i Snapchat, ilay fampiharana lamaody ho an'ny "Sexting"
Spy vs Spy, lalao Android misy fampiasa Retro tafiditra ao
Spy vs Spy dia lalao Android Retro vaovao izay natambatra tamin'ny interface maoderina hitazonana ny fahamendrehany.
Ataovy havaozina hatrany amin'ny Deexme ny lisitry ny fifandraisana
Deexme dia rindranasa Android izay hanampy anay hitazona ny mombamomba ny fifandraisantsika amin'ny finday.
KakaoTalk izao dia mamela anao hizaha toetra vaovao alohan'ny hamoahana azy ireo
KakaoTalk dia fampiharana fandefasan-kafatra an-tserasera izay ahafahanao miditra amin'ny programa beta hizaha toetra vaovao
Path Talk, ilay fampiharana fandefasan-kafatra vaovao an'ny tamba-jotra sosialy Path
Path Talk dia rindrambaiko fandefasan-kafatra vaovao an'ny sehatry ny Path amin'ny fiezahany hanatsara ny fifandraisana eo amin'ireo mpampiasa azy
Fakan-tsary Google: Ahoana ny fakana sary lehibe
Eto ianao dia manana horonantsary hahafahanao mahita ny fomba hakana sary panoramic amin'ny fakantsary Google.
Xyo, ny Smart Android App izay manomboka amin'ny Play Store
Xyo dia rindranasa Android izay mampiseho vaovao sy torohevitra manan-danja izay tsy mahaliana afa-tsy ny mpampiasa ny fitaovana Android.
MailWise dia mpanjifa mailaka tena mahaliana ho an'ny Android
MaiWise dia mpanjifa mailaka hafa izay natao tsara sy manana endrika manasongadina ny fanasongadinana ny resaka
Chris Lacy dia mandefa ny fampiharana tsy mbola voatanisa ho an'ny Action Launcher
Unread Count for Action Launcher dia fampiharana izay iray amin'ireo zavatra vitsy tsy nananan'ity mpandefa fampiharana lehibe ity
Fampiharana Android mahatalanjona: App Backup & Ampodio
Androany aho te-hanolotra anao App Backup & Restore, fampiharana izay hanampy anay hanao kopia backup amin'ny endrika apk an'ireo rindranay rehetra.
Fomba 4 hahitana Android very
Raha iray amin'ireo manadino ny telefaoninao foana ianao any ho any, anio amin'ny Androidsis dia asehonay anao ny fomba 4 hahitana Android very.
Ahoana ny fametrahana apetraka mivantana avy amin'ny Play Store, nefa tsy apetraka amin'ny Android
Androany aho te-hanoro anao fomba tsara hametrahana fampiharana avy amin'ny Play Store, nefa tsy manana ny fampiharana Google ofisialy amin'ny Android.
Mail, ilay fampiharana Android vaovao hitantanana ny kaontinay
Google dia manohy mamoaka fampiharana manokana avy amin'ny laharan'ny Nexus mankany amin'ny fitaovana Android hafa. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nandefa ny mailaka fampiharana.
Intel dia mandefa Pocket Avatars, fampiharana amin'ny chat izay "mapiara" ny fisehoan'ny tavanao ho avatar
Intel dia mandefa Pocket Avatars, fampiharana noforonina hanana tanjona tokana hampiala voly ireo mpampiasa hiresaka
Google mandefa ny fampiharana mailaka serial Android amin'ny Play Store [APK Download]
Google mandefa ny fampiharana mailaka serial Android amin'ny Play Store manaraka ireo izay navoaka teo aloha toa ny Google Camera na ny app keyboard
Windows Phone 8 amin'ny Android-nao
Te hanandrana ny rafitra fiasa Microsoft Windows Phone 8 ve ianao nefa tsy mamela ny Android-nao? Jereo avy eo.
Ahoana ny fomba hahamety kokoa ny fivezivezena amin'ny Android
Miaraka amin'ity rindranasa vaovao ity izay hita ao amin'ny Google Play Store, dia ho afaka hanao ny bara fitetezana ny androids ho miasa kokoa izahay.
Boot vaovao ho an'ny maodely Motorola miaraka amin'ny tintan'ny World Cup amin'ny baolina kitra
Motorola dia nanolotra fampiharana kely maimaimpoana izay mampiditra sary mihetsika amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra Brezila 2014 amin'ny fanombohan'ny telefaona finday.
[APK] Sintomy ilay Samsung Launcher Terrain Launcher manokana
Eto aho avelako ianao hisintona mivantana ny APK, ilay hevitra Launcher vaovao sy mahagaga noforonin'i Samsung, ny anarany Terrain Launcher.
Hita tao amin'ny Play Store izao ny Showcase momba ny lohahevitra Cyanogen
Miaraka amin'ny Showcase Cyanogen Theme Show natomboka tao amin'ny Play Store dia ho afaka ampanjifaina tsara ny findainao amin'ny CyanogenMod ROM ianao
Vaovao farany Bubble Link miaraka amin'ny kinova Pro amidy
Ny fanavaozana Link Bubble vaovao dia mitondra fanatsarana ny kinova Pro sy ny fampidirana azy amin'ny kinova maimaim-poana amin'ny rohy mampifandray avy amin'ny fampiharana rehetra
Tonga mpamorona tontolo vaovao miaraka amin'i Topia World Builder
Topia World Builder dia rindranasa Android izay manolotra antsika hamorona tontolo vaovao miaraka amin'ny rantsan-tànantsika amin'ny finday.
Garmin Víago dia mitondra ny fitetezana premium Garmin mankany amin'ny finday avo lenta amin'ny vidiny kely
Garmin Víago dia mitondra ny fitetezana premium Garmin rehetra amin'ny findainao amin'ny vidiny izay sarotra ny milaza tsia
Midira mora foana amin'ny atiny PC na MAC anao
Androany izahay dia manolotra rindranasa amin'ny famandrihana isan-taona, izay manome anay fidirana amin'ny atin'ny PC na MAC avy amin'ny Android.
Ataovy miavaka tsara ny Android anao amin'ny Gravity Box sy XBlast Tools
Androany isika dia hahita famerenana ny GravityBox sy XBlast Tools, izay noresahiko fohifohy tamin'ity lahatsoratra ity, mba hanamboarana ny bara tsy misy ROMS.
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Internet amin'ny Internet
Amin'ity lesona manaraka ity dia asehoko anao ny fomba fametrahana rindranasan'ny tranokala Firefox amin'ny rafitra fiasa Android.
Angry Birds: Nanambara ny Transformers
Rovio dia nanambara fivoahana vaovao momba ny Angry Birds amin'ny sary mihetsika milioney: Angry Birds: Transformers.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny WhatsApp, ny tetika ary maro hafa
Eto ianao dia manana andiana toro-hevitra sy hafetsena hahafantaranao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny WhatsApp.
Ahoana ny fandefasana karazana rakitra amin'ny WhatsApp
Androany aho dia manome soso-kevitra fampiharana iray hamitahana ny WhatsApp mba hahafahany mizara karazana rakitra rehetra.
Echo Lockscreen hialana amin'ny fampandrenesana be loatra
Echo Lockscreen dia fampiharana iray izay ao anatin'ny dingana alpha ary azo sintonina maimaim-poana avy amin'ny Play Store
Fampiharana Android mahatalanjona: Copy Bubble Androany
Copy Bubble dia rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny Android izay manome safidy tsara be dia be ho antsika amin'ny fifehezana tanteraka ny Clipboard an'ny Android.
Lasa maimaimpoana ny Camera Zoom FX
Ny Camera Zoom FX dia misy maimaim-poana miaraka amin'ny kinova hafa navoaka ankoatry ny Premium
Makà sary tsy misy mahalala miaraka amin'ny Silent Camera
Silent Camera dia rindranasa Android izay mampangina ny feon'ilay fakantsary fakana sary hisambotra mangingina seho.
Ny fihiran'ny vorona dia tsara indrindra, ny vorona tsara indrindra amin'ny findainao
Birds Singing Sounds Best dia rindrambaiko manana fahaizana mitendry feon'orona vorona mba hialana sasatra na hanao vazivazy amin'ny finday.
Ready dia rindrambaiko voavolavola tsara izay manome hery ny dialer sy ny lisitry ny fifandraisana
Ny vonona dia antso sy lisitry ny lisitry ny fifandraisana izay hanatsara ny fomba fifandraisanao amin'ny namanao sy ny mpifandray aminao
Google Now dia milaza aminao ny toerana nametrahanao ny fiaranao, OK Google
Androany dia asehoko anao bebe kokoa momba ity fiasa Google Now ity izay milaza aminao ny toerana nametrahanao ny fiaranao.
Sakafo tsara miaraka amin'ny CaloryGuard Pro
CaloryGuard Pro dia fampiharana iray izay hanampy antsika hahafantatra ny lanjan'ny kaloria sy ny haavon'ny tavy amin'ny sakafo tsirairay izay ampahan'ny sakafo
Fahatratrarana zava-misy fatratra amin'ny sary miaraka amin'ny Pro HDR Camera
Pro HDR Camera dia fampiharana Android izay manambatra sary maro nalaina tamin'izany fotoana izany hahazoana sary tokana misy kalitao tena tsara.
Mianatra mahafantatra karazana vorona tsirairay amin'ny Android
Fampiharana Android mahaliana iray dia hahafahantsika mamantatra ireo karazam-borona isan-karazany sy ireo fiasa fanampiny azo avy amin'ny terminal.
Te-ho Tester Beta QKSMS ve ianao?
QKSMS dia rindrambaiko fanoloana ny SMS misy valindrindra azo atao maro. Eto izahay dia manazava ny fomba atao hoe QKSMS Beta Tester.
Lenovo dia mandefa ny fampiharana Android amin'ny fitaovana fitehirizana Lenovo Beacon
Ny fampiharana Lenovo Beacon Storage dia azo alaina izao
Blinq Launcher azo alaina ao amin'ny Play Store maimaim-poana
Eto ianao manana famerenana ny Blinq Launcher, mpandoka mahafinaritra ho an'ny KitKat.
Ahoana ny fampiasana ny blur function an'ny Google Camera
Amin'ity horonantsary vaovao ity dia asehoko anao ny fomba fampiasana ny blur function an'ny Google Camera hamoronana sary kanto.
Fampiharana Android mahatalanjona: Bokin-tranonkala ankehitriny
Scrapbook dia fitaovana tsy mampino izay mamela antsika hisambotra ny faritra voafantina amin'ny pejin-tranonkala ihany.
WakeUp mamoha ny findainao Android rehefa alainao izany
WakeUp dia mamela anao hamaha ny telefaona rehefa raisinao izany ary tazominao amin'ny zoro iray eo alohanao
Sony Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny lohahevitra FIFA World Cup 2014 Xperia Xperia
Ny lohahevitra Xperia ho an'ny FIFA World Cup 2014 FIFA dia azo alaina ao amin'ny Play Store
Tongava Deemo hamonjy ilay anjely lavo avy any an-danitra
Deemo dia anaran'ny toetra miafina izay ny iraka dia ny manampy anjely hiverina any an-danitra, avy tamin'ny toerana nahalavoany.
Hangar dia mitondra ny fampiharana efa be mpampiasa amin'ny bara fampandrenesana
Miaraka amin'i Hangar dia azonao atao ny mampifangaro ireo rindranasa be mpampiasa indrindra ao amin'ny tsipika fampandrenesana amin'ny findainao
Ny herin'ny fanovana horonantsary amin'ny Android dia mitondra ny anarana PowerDirector
PowerDirector dia rindranasa Android izay ahafahantsika manova ny horonan-tsary amin'ny famaritana avo sy mizara izany amin'ny tambajotra sosialy sy YouTube.
Kinova vaovao an'ny QuickPic hisintona avy amin'ny vondrom-piarahamonina beta vaovao amin'ny fampiharana
Picasa sy 500px no serivisy izay tohana amin'ny kinova QuickPic vaovao
Midira amin'ny rindranasao raha tsy mamoha ny efijery amin'ny CM Locker
CM Locker dia rindrambaiko iray avy amin'ireo mpamorona Clean Master, izay ahafahantsika miditra amin'ireo rindranay be mpampiasa indrindra nefa tsy manokatra ny efijery ary tsy mila mpampiasa Root.
Ny fanampiana Chromecast no zava-baovao ao amin'ny VLC ho an'ny Android
VLC ho an'ny Android dia iray amin'ireo mpilalao tsara indrindra milalao karazana video sy endrika audio
Mandefasa hafatra sy fampandrenesana amin'ny telefaona finday Android mankany amin'ny PC
Amin'ny fampiasana ireo rindranasa manokana ireo dia afaka mahazo ny fampandrenesana mahatratra ny finday isika, fa amin'ny PC.
Amin'ny Google Now dia tsy ho diso ny fijanonana manaraka intsony ianao
Ny fanavaozana farany ny Google Now dia hanampy antsika hahafantatra ny faharetan'ny fotoana hiasana, hodiantsika na toeran-kafa hafa.
Ahoana ny fivezivezena miafina amin'ny Android amin'ny SurfEasy
SurfEasy dia rindranasa Android izay hanafina ny fitetezana anao amin'ny alàlan'ny tranonkala samihafa amin'ny fotoana rehetra amin'ny maha-mpanjifa VPN anao.
Fampiharana mandeha amin'ny fety: MPQA, miala voly rehefa misotro amin'ny namanao
MPQA dia rindranasa izay ahitana lalao mini fisotro mahafinaritra efatra, tsy maintsy ananana amin'ny fety
Kilalao ofisialin'ny Godfire voalohany: Mitsangàna amin'ny Prometheus
Vivid Games dia nanambara fa ho tonga amin'ity volana ity ny Godfire: Rise of Prometheus
YouTube kinova 5.7 dia mitondra zava-baovao ary izay tena mahaliana satria mamela anao hisafidy ny kalitaon'ny horonan-tsary
Angry Birds Stella dia ho tonga amin'ny faran'ny taona
Rovio dia manamafy fa ny fanombohana ny Angry Birds Stella dia hatao mandritra ny telovolana fahatelo amin'ity taona 2014 ity
Maty mialoha, zombie ary scooter
Maty mialoha dia mametraka antsika amin'ny kiraron'ireo bisikileta izay ny tanjony dia ny handositra ny apokalypsy zombie.
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany mpandefa an'i Lucid
Androany amin'ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android dia manolotra anao izahay Lucid Launcher, mpandefa iray hafa sy miasa ho an'ny Android.
Active Launcher, mpandefa iray hafa miorina amin'ny Google Now
Active Launcher dia mpandefa fampiharana izay somary tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika amin'ny Android.
Miaraka amin'ny Android Device Manager 1.2 ianao dia afaka miditra an-telefaona namana hahitana, hamafa na hanidy ny telefaoninao
Activate OK Google amin'ny teny espaniola izao azo atao noho ny Xposed Framework
Ny fampiatoana OK Google amin'ny teny espaniola dia azo atao miaraka amin'ity modely maimaimpoana ho an'ny Xposed Framework ity
[APK] Sintomy ny kinova farany an'ny Google Camera miaraka amina endri-javatra mahavariana kokoa aza
Eto aho avelako mivantana ianao amin'ny apk kinova 2.2 an'ny fakantsary Google miaraka amina fiasa tsy mampino.
Homee launcher, mpanafika Android saika sariitatra
Homee Launcher dia iray amin'ireo Android Launchers izay, noho ny endriny, saika sarimiaina, tiako ny manoro anao hanome ny fitaovanao hikasika hafa.
Karatra vaovao momba ny fampahalalana ny toetr'andro ho an'ny Google Now no aparitaka ao amin'ny Play Store
Adventure Town, afangaro ny raikipohy mba hahombiazana
Efa imbetsaka isika no niresaka momba ny lamaody rehefa miresaka lalao video amin'ny finday. Ary matetika mitranga ...
Mpilalao mozika 3 ho an'ny Android izay tsy azonao adino
Miverina miresaka momba ny rindranasa ho an'ny Android isika, amin'ity tranga ity ho an'ireo izay tia feo. Izahay dia manome anao tolo-kevitra 3 ho fantatr'ireo mpilalao mozika.
Fampiharana Android mahatalanjona: Mpandika teny amin'izao tontolo izao ankehitriny
World Lens Translator dia iray amin'ireo fampiharana tsy mampino ho an'ny Android izay tsy azontsika an-tsaina akory hoe misy.
Dragon Coins dia ezaky ny SEGA hampiasa lamaody
SEGA dia nanangana Dragon Coins, lohateny izay miloka amin'ny fironana ankehitriny nefa tsy misy aingam-panahy.
Ahoana ny fomba hahazoana toerana fitehirizana tsy manam-petra ho an'ny sarinao ao amin'ny Google Drive
Anio dia hasehoko anao ny fomba fanamboarana ny Google Photos hahazoana toerana fitahirizana tsy manam-petra ho an'ny sarinay ao amin'ny Google Drive.
Ny Qustodian dia azo ampiasaina amin'ny Qustodian
Ny famandrihana amin'ny fijerena dokam-barotra amin'ny findainao dia azo atao izao ary ahazoana aina kokoa sy mora kokoa noho ny taloha miaraka amin'ny kinova Qustodian ho an'ny Android.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fantsom-paritra You Tube hijerena izay atiny ao amin'ny Android
Amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia hasehoko anao, amin'ny fampiasana fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android, ny fomba hialana amin'ny fetra isam-paritry ny You Tube.
Androany dia te hanokana ity fizarana fampiharana tsy mampino ho an'ny Android ity amin'ny Peek avy amin'ny ParanoidAndroid azo alaina ao amin'ny Play Store ho an'ny KitKats rehetra aho.
Manaova jiro maranitra Android anao amin'ny Lux Auto Brightness
Betsaka amin'ireo fitaovana vaovao no mampifangaro azy amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, ny Lux Auto Brightness dia manampy amin'ny hazavana manan-tsaina, maody semi-manual ary mianatra avy aminao.
Fanavaozana Photoshop Touch izay manampy borosy bebe kokoa sy fitaovana vaovao
Borosy vaovao amin'ny fanavaozana vaovao ny PhotoShop Touch ho zava-baovao farany ankoatry ny hafa
Sintomy ny TomTom ho an'ny Android maimaim-poana
Eto ianao manana ny pitsopitsony rehetra hahazoana TomTom for Android maimaim-poana amin'ny fanavaozana ny rindranasa farany sy nohavaozina
AndroTools, ilay fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android-nao
AndroTools dia rindranasa iray-amin'ny-iray ho an'ny Android izay manolotra asa manokana mihoatra ny 7 amin'ny fampiharana iray.
Singstar dia hamela ny Gamers hampiasa ny finday avo lenta ho toy ny mikrô amin'ny PS3 sy PS4
Miaraka amin'ny kinova Singstar manaraka ho an'ny PS4 sy PS3 dia azonao atao ny mampiasa ny findainao finday ho toy ny mikrô
Addappt dia tonga amin'ny android mba hampifanarahana ny bokin'ny adiresin'ny fifandraisana
Addappt dia hikarakara ny fampifanarahana ny bokin'ireo adiresy misy anao, fa tsy hitahiry karazana fampahalalana amin'ny mpizara azy manokana
Android sy ny biby fiompinao: anio alika. Ahoana no mampiofana alika
Alika. Ny fomba fanabeazana alika dia fampiharana canine izay hampianatra anao torolalana sasany hampianarana ny alikanao
Jair Player: Music Rainbow, mpilalao mozika maimaimpoana manaitra ho an'ny Android
Jair Player: Music Rainbow no mety ho mpilalao mozika maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Android.
3 mpitantana rakitra tsara ho an'ny Android
Ny fahafaha miditra amin'ny lahatahiry amin'ny Android dia miresaka momba ny toetran'ny OS. Androany isika dia miresaka momba ny mpitantana rakitra 3 tsara ho an'ny Android.
Fampiharana Android mahatalanjona: Fanamarihana androany
Androany aho te-hanolotra anao amin'ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, Screen Note, fampiharana izay hanome anay ny fitovian'ny Quick Memo avy amin'ny LG.
[APK] Izaho rehetra mpandefa ho an'ny rehetra tsy misy fetra amin'ny firenena
Eto ianao manana ny apk ho an'ny fisintomana mivantana ny Every me launcher ho an'ny rehetra tsy misy fetra amin'ny firenena.
Avadiho ho scanner PDF maimaimpoana ny Android-nao
Avadiho ho scanner miaraka amin'ny PDF Scáner Free ny Android anao, fampiharana maimaim-poana tanteraka feno fisongadinana manokana.
CM Apps dia mitondra fampiharana CyanogenMod amin'ny telefaona Android anao
CM Apps dia mitondra ny rindranasa CyanogenMod rehetra amin'ny ROM hafa
[APK] Sintomy ny kalandrie Xperia Z2 ho an'ny Android rehetra
Eto ianao dia manana ny kalandrie Xperia Z2 ho an'ny fametrahana sy fitiliana amin'ireo maodely terminal Android hafa ankoatry ny marika Japoney.
Fampiharana Android 3 hanatsarana ny fitadidianao sy hampiofana ny atidohanao
Raha iray amin'ireo olona tia fitsapana amin'ny faharanitan-tsaina sy quiz ianao dia asehonay anao anio ny fampiharana Android 3 hanatsarana ny fitadidianao sy hampiofana ny ati-dohanao.
Tony Hawk Shred Session, hanomboka amin'ny finday ny angano
Activision sy Tony Hawk dia miasa ao amin'ny Shred Session, mpihazakazaka tsy misy farany miaraka amin'ny skateboarding ao anatiny.
Ahoana ny fanatsarana ny multitasking amin'ny fitaovana Android rehetra
Mpampiasa mihoatra ny iray no mety nanontany tena momba ny hoavin'ny multitasking amin'ny Android. Androany dia antenainay hilaza aminao ny fomba hanatsarana ny multitasking ao amin'ny Google Play.
Sintomy ny Music Player an'ny Galaxy S5 amin'ny Android rehetra
Sintomy ny mpilalao mozika ofisialin'ny Samsung Galaxy S5
Ahoana ny fomba hijerena an'i Barça-Atlético de Madrid maimaimpoana amin'ny Android
Androany aho te-hampiseho fampiharana vitsivitsy anao izay hanampy anay hijery ny Barça-Atlético de Madrid maimaimpoana amin'ny terminal Android-nay.
Nahazo ny Quest Visual i Google, mpanamboatra ilay mpandika teny Word Lens nampitomboina
Google dia nahazo ny Quest Visual, izay meloka amin'ny famoronana iray amin'ireo fampiharana mahagaga indrindra ho an'ny finday toy ny Word Lens
[APK] Samsung Galaxy S5 Music Player ho an'ny Android rehetra
Eto ianao dia manana ny maodelin'ilay mpilalao teratany Samsung Galaxy S5 Music Player ho an'ny fampidinana sy fametrahana amin'ny Android rehetra
Vaovao farany Swype izay manatsara ny fahombiazan'ny fampiharana
Ny fanavaozana ny Swype vaovao dia mitondra fanatsarana sy fanamboarana fahombiazana toy ny vahaolana amin'ny olana amin'ny KitKat amin'ny fitaovan'ny Samsung
Fampivoarana vaovao an'ny Play Store miaraka amin'ny fanohanan'ny PayPal ary fanatsarana ny fahitana [[Download APK]
Ny kinova vaovao an'ny Play Store dia miseho miaraka amin'ny fanohanan'ny PayPal sy ny fanatsarana sary vaovao ao amin'ireo bokotra
Apps fanovana sary maimaimpoana 9 maimaimpoana maimaimpoana mandritra ny iray andro ao Amazon
Androany fotsiny dia ho afaka tsoahintsika ireo rindranasa fanovana sary 9 maimaim-poana amin'ny Amazon
Fampiharana 3 hahazoana ny mozika avy amin'ny sarimihetsika tianao
Manamarika antsika ny fahitalavitra ary hita amin'ny finday Android ihany koa izany. Androany izahay mitondra fampiharana 3 ho anao hihazona ny mozika amin'ny sarimihetsika tianao indrindra.
PayPal dia azo ampiasaina ho fomba fandoavam-bola ao amin'ny Google Play
Google dia nanambara ny fomba fampiasana PayPal ho fomba fandoavam-bola ao amin'ny Google Play manomboka androany
Manomboka androany dia i Fleksy no fitendry haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao, manapaka ny firaketana ny Guinness
Hatramin'ny androany, i Fleksy no fitendry haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao, noho izy namaky ny firaketana an'i Guinness notanan'i Swype sy Microsoft.
[APK] Apetraho amin'ny rindrambaiko Android ny fampiharana One Plus Gallery
Eto ianao dia manana ny fampiharana Gallery mahavariana an'ny One Plus ho an'ny fampidinana mivantana amin'ny apk sy fametrahana amin'ny Android rehetra.
Ahoana ny fomba hamoronana hitsin-dalana ao amin'ny bara fampandrenesana
Androany aho hampianatra anao, amin'ny alàlan'ny fampiharana App maimaim-poana, ny fomba famoronana hitsin-dàlana amin'ny bara fampandrenesana Android.
Ahoana ny fomba famindrana ireo rakitrao voatahiry ao anaty rahona amin'ny serivisy iray mankany amin'ny iray hafa ary tsy maty manandrana
Fampianarana tsotra izay, amin'ny alàlan'ny fampiharana maimaim-poana, dia ho afaka hamindra ireo rakitrao voatahiry ao anaty rahona avy amin'ny serivisy iray mankany amin'ny iray hafa.
Apetraho amin'ny fakana Android 4.1, 4.2 ary 4.3 ny fakantsary Google
Eto ianao manana ny apk novaina an'ny fakan-tsary Google hahafahanao mametraka azy amin'ny kinova Android izay tsy tohanana amin'ny fomba ofisialy.
Ampidiro ny Launcher Ultra Power Saving Mode an'ny Samsung Galaxy S5 amin'ny Android
Eto ianao manana Launcher ho an'ny Android izay manandrana maka tahaka ny Launcher Ultra Power Saving Mode an'ny Samsung Galaxy S5.
Ampahafantaro ny fifandraisana misy anao amin'ny vonjy taitra miaraka amin'ny fampiharana Motorola Alert hita ao amin'ny Moto E sy Moto G LTE
Ny fangatahana Motorola Alert dia azo alaina ho an'ny terminal Moto E sy Moto G 4G LTE amin'izao fotoana izao
Rahampitso Nintendo mandefa ny fampiharana voalohany amin'ny Android
Rahampitso Nintendo dia mandefa ny fampiharana voalohany amin'ny Android, fampiharana hampifandray ireo fitaovana Android amin'ny Nintendo 3DS
[APK] Sintomy sy apetraka ny Widget CyanogenClock ho an'ny efijery hidin-trano sy ny birao amin'ny terminal Android rehetra
Eto aho avelako ianao hisintona mivantana ny apk CyanogenClock Widget ho an'ny fametrahana amin'ny Android rehetra.
Sintomy ny SmartAlarm an'ny Samsung Galaxy S5 na aiza na aiza terminal [APK]
Androany aho mizara aminareo rehetra ny fampiharana ny fonony an'ny Samsung mba hiasa amin'ny terminal Android hafa. Ny anarany dia SmartAlarm Samsung.
Bright Weather no fampiharana toetr'andro vaovao an'ny LevelUp Studio miaraka amina lafiny sosialy tena mahaliana
Bright Weather dia fampiharana toetr'andro vaovao izay miavaka amin'ny fahafahany mizara ny toetr'andro ho an'ny faritra misy anao amin'ny sary
Misy horonantsary mampiseho ny kitendry Minuum ao amin'ny Google Glass
Ny fampidirana lahatsoratra dia azo atao amin'ny alàlan'ny kitendry Minuum ao amin'ny Google Glass, izay ahafahantsika mampiasa fihetsika sy lohantsika manokana hanoratra
Fampiharana Android mahatalanjona: Fihetsika haingana ankehitriny
Edge Quick Actions dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android izay hahafahantsika mampiasa fomba vaovao hidirana haingana amin'ireo rindranay farany teo.
Androany amin'ny fitarihana tetika ho an'ny Android ny fomba hahafantarana raha voasakana tamin'ny WhatsApp ianao.
Androany amin'ny Android sy ny biby fiompinao dia tiako ny mampahafantatra anao amin'ny Facebook ho an'ny biby fiompy Wuowi, tambajotra sosialy izay ho tian'ny biby fiompinay.
AVG Image Shrink & Share no fampiharana hampihenana ny haben'ny sarinao
Ny AVG Image Shrink & Share dia mampihena ny haben'ny sarinao, na dia manome ny fahafaha-manao an'io amin'ny andiany aza.
Ampahafantaro! asehoy fampandrenesana fampiharana amin'ny birao birao na efijery hidin-trano
Ny safidy matotra amin'ny Dashclock Widget dia ampahafantaro tsara!. Maimaimpoana tanteraka amin'ny Play Store.
Sintomy ny lohahevitra ofisialin'ny FIFA World Cup ho an'ny telefaona Xperia anao
Ny lohahevitra ofisialin'ny FIFA World Cup dia tafaporitsaka ho an'ny fitaovana Xperia na dia tsy maintsy mamely ny Play Store aza izy io
Ampiasao mora foana ny vokatr'ireo taratra ho an'ny sarinao Android miaraka amin'ny effets ny Reflection Photo
Androany aho te-hanolotra rindranasa fanovana sary izay hanampy anay hanampy effets taratra avo lenta avy amin'ny Android-tsika.
Fampiharana Android mahatalanjona: mpandefa XH anio
XH Launcher dia manome hazavana tsy manam-paharoa sy fisehoana hita ho an'ny MIUI na iOS 7 launcher avy any Apple. Mpandefa Android 100x100 voatondro.
Fampiharana maimaimpoana 3 hanarahana ny famaranana ny ligy Espaniola hatramin'ny iray minitra
Eto ianao dia manana fampiharana telo maimaim-poana tsara indrindra azontsika sintonina hanarahana ny famaranana ny ligin'ny Espaniola 2013/2014 hatramin'ny iray minitra
Sintomy ny WhatsApp miaraka amin'ilay fiantsoana feo vaovao amin'ny kinova beta
Izahay izao dia manana ny kinova WhatsApp vaovao azo alaina amin'ny fisintomana ofisialy miaraka amin'ny fiantsoana feo vaovao.
Google Maps tsy misy sarintany ivelan'ny toerana afaka 30 andro
Ny sarintany ivelan'ny Google Maps dia iray amin'ireo endrika vaovao tsara indrindra amin'ny kinova 8.0, saingy miaraka amin'ny kilemaina, hanjavona izy ireo afaka 30 andro
Fampiharana Android maimaim-poana 3 handraisana antso
Androany aho te-hanolotra anao fampiharana telo maimaim-poana ho an'ny Android izay hanampy anay hanoratra antso
Fa maninona no miteraka adihevitra be ny fampiharana Uber ho an'ny Android?
Manampy sy manampy fanakianana ny fampiharana izay nametraka ny zotram-pilan'ny taxi-be Barcelona. Androany dia manandrana mahatakatra ny antony mahatonga ny adihevitra be izahay.
[APK] Sintomy mora foana ny rindranasan'ny Samsung, Sony ary Cyanogenmod avy amin'ny Android-nao
Ported Apps dia rindrambaiko ahafahantsika misintona ny rindranay manokana avy amin'ny Samsung, Sony ary Cyanogenmod hizaha toetra amin'ny Android.
Fanavaozana ny fakan-tsary Google Camera izay mitondra sary nalaina nandritra ny fandraisam-peo video [APK]
Ny fanavaozana ny fakan-tsary Google Camera dia ahafahanao maka sary rehefa mandefa horonantsary. Ny hany zava-baovao entin'ity kinova vaovao ity.
iOS 7 Launcher, iray amin'ireo launcher fampiasa iOS ratsy indrindra azontsika jerena ao amin'ny Google Play Store
iOS 7 Launcher dia iray amin'ireo Launcher ratsy indrindra ho an'ny Android izay azoko andramana, tsy ampy amin'ireo safidy fanamboarana ary feno dokambarotra manafika.
Ny TuneIn Radio kinova 12.0 dia mitondra fanovana vaovao amin'ny "endrika" sy ireo fiasa ara-tsosialy vaovao
Ny TuneIn Radio kinova 12.0 dia mitondra vaovao amin'ny lafiny sosialin'ny fampiharana ary fiovana vaovao eo amin'ny lafiny fahitana
Sherpa, ny safidy tsara kalitaon'ny Google Now dia havaozina miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Ny fanavaozana Sherpa farany indrindra ho an'ny Android izay misy lafin-javatra vaovao maro izay mahatonga ny fampiharana ho faran'izay tsara kalitao amin'ny Google Now.
Fampiharana Android mahatalanjona: DinamicNotifications Androany
Androany aho te hampahafantatra anao amin'ny Incredible Applications for Android DynamicNotification, rafitra fampandrenesana vaovao mitovy amin'ny Peek.
Sony nandefa ny fampiharana extension Instagram ho an'ny SmartWatch 2
Ny fampiharana fanitarana Instagram ho an'ny SmartWatch 2 dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny mba handraisana ny fampandrenesana rehetra avy amin'ny tambajotra sosialy malaza
Ahoana ny fomba ahafahana manome tarehimarika WhatsApp roa amin'ny fitaovana iray (Mety)
Eto ianao dia manana tutorial tsikelikely amin'ny dingana ahafahana manome isa WhatsApp roa ao amin'ny terminal iray ihany ary tsy maty manandrana.
[APK] Mametraka fampandrenesana ParanoidAndroid Peek amin'ny terminal Android 4.4 rehetra
Androany aho te hampiseho aminao ny fomba fametrahana ny rafitra fampandrenesana vaovao an'i ParanoidAndroid amin'ny Android Kit Kat nefa tsy asio Romana masaka.
Grumpy Weather no widget amin'ny toetrandro mahazatra sy mahafinaritra indrindra azonao jerena amin'ny Android
Grumpy Tiempo no miandry anao ao amin'ny Play Store maimaimpoana mba hampahafantatra anao amin'ny fomba mahafinaritra momba ny mari-pana sy ny toetr'andro mandritra ny andro vitsivitsy.
9 Cards dia mpandefa voatendry tsara handaminana ny fampiharana tsy misy hafa
Ny karatra 9 dia manolo-kevitra handamina ny fampiharana anao handamina azy ireo tsara amin'ny fotoana ianarana avy amin'ny lamina fampiasanao
Ny kinova Google Drive vaovao dia mitaky ny fametrahana Google Docs sy Google Sheets [Download APK]
Ny kinova Google Drive vaovao dia hanery anao hametraka Google Docs sy Google Sheets mba hanovana antontan-taratasy
Fanavaozana ny Google Now: karatra voadidy rehefa very ny fifandraisana Internet
Ny fanavaozana ny Google Now dia mitondra zava-baovao mahaliana toy ny famenoana karatra na dia tsy manana fifandraisana Internet aza ianao
Flashout 2, niverina ny hazakazaka sambo tsara indrindra
Flashout 2 dia ny fitohizan'ny iray amin'ireo lalao hazakazaka tsara indrindra amin'ny Android, miaraka amin'ny multiplayer ankehitriny.
Ny Playlists izao dia azo ahodina sy zaraina amin'ny Google Play Music
Ny Playlists amin'ny Google Play Music dia azo ovaina toy ny amin'ny desktop amin'ny web desktop.
Inona no vaovao ao amin'ny Snapchat ao amin'ny kinova vaovao: hafatra eo noho eo sy resaka video
Ny fiasa vaovao an'ny Snapchat izay ho hitanao ao amin'ny kinova vaovao dia ny chat video sy ny hafatra eo noho eo ao amin'ny fampiharana sexting lamaody
Ahoana ny fomba hanoloana ny teny miafinao rehetra amin'ny findainao amin'ny app Clef
Raha efa nanandrana fomba fiarovana maromaro ho an'ny tsimatra ianao, dia atoro anao anio ny fomba fanoloana ny teny miafinao rehetra amin'ny findainao amin'ny app Clef.
Ahoana ny fomba fampiasana efijery finday lehibe amin'ny tanana iray?
Ny phablets dia lasa ivon'ny fifantohana, ary manomboka miahiahy ny mpampiasa amin'ny fampiasana an'io finday avo lenta finday io amin'ny tanana iray.
Amboary ny fakan-tsary Moto X miaraka amin'ny Fakan-tsary
Ny fampiharana ny Moto X dia nanjary malaza sy nalaina tahaka ary ny ankamaroan'ny olona dia maniry ny hanana ny sasany amin'ireo asany, toy ny fakantsary izay ampandehanana amin'ny alàlan'ny famadihana ny finday.
Ampidiro ny Google Now Launcher amin'ny Android 4.2 na avo kokoa
Ianaro ny fomba fametrahana Google Launcher amin'ny fitaovana misy Android 4.2 na avo kokoa.
Tonga amin'ny Android ny famolavolana vaovaon'i Spotify [Download APK]
Ny famolavolana Spotify vaovao dia azo alaina amin'ny Android izao hanaraka ny tsipika natombok'ilay orinasa amin'ny solosaina iPhone sy birao
Farm Heroes Saga, ny lalao finday miady amin'ny adin-tsaina tsara indrindra
Ao amin'ity lalao piozila ity ny iraka dia ny manangona legioma 3 na maromaro avy amin'ny toeram-piompiana mba hanatanterahana ny baiko isaky ny ambaratonga sy ny rehetra miaraka amina hetsika voafetra.
Ahoana ny fananana fampandrenesana minimalist amin'ny efijery hidin-trano Android?
Jafier dia fampiharana maimaim-poana azonao sintonina avy amin'ny Google Play ary ahafahanao manana fampandrenesana minimalista amin'ny efijery hidin-tariby Android-nao.
Ny fomba fahandro IFTTT 25 tsara indrindra ho an'ny Android
Misy lahasa isan-taonina izay azo alefa automatique amin'ity rindranasa vaovao navoaka tamin'ny Android ity. Izahay mitondra anao ny fomba fahandro IFTTT tsara indrindra.
Ary farany misy IFTTT amin'ny Android hamoronana asa mandeha ho azy eo amin'ny serivisy sy fampiharana malaza
IFTTT amin'ny Android dia midika fa afaka mamorona fomba fahanao manokana ianao mba hanaingoana ireo asa eo anelanelan'ny serivisy malaza toy ny Facebook, Evernote na Reddit
Ny fampiharana tsy mitonona anarana antsoina hoe Secret dia ho avy amin'ny Android
Ho tonga amin'ny Android ny tsiambaratelo, amin'ny tenin'ny mpiara-manorina ny fanombohana izay manantena ny hanitatra azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena
Mangina ireo vondrona miresaka amin'ny WhatsApp mandritra ny 100 taona miaraka amin'ny kinova farany
Miaraka amin'ny endrika vaovao amin'ny serivisy fandefasan-kafatra malaza indrindra azonao atao ny mampangina ireo vondrona miresaka amin'ny WhatsApp mandritra ny 100 taona
Ahoana no hahalalanao izay rindranasa sisa tavela amin'ny Android anao?
Raha efa ela ianao no niaraka tamin'ny findainao ary mihangona ireo rindranasa nefa tsy fantatrao tsara ny antony, hampianarinay anao hahafantatra izay rindranasa sisa tavela amin'ny Android ianao.
Sintomy ary apetraho ny HTC's BlinkFeed Launcher amin'ny Android 4.4 rehetra
Efa manana seranana miasa tanteraka an'ny HTC's BlinkFeed Launcher ho an'ny fisintomana sy ny fametrahana amin'ny terminal Android 4.4 izahay.
Fampiharana mpisolo toerana 3 an'ny Gmail hitantanana ny mailakao amin'ny Android
Raha tsy resy lahatra amin'ny fampiharana Gmail ofisialy hitantana ny mailakao amin'ny Android ianao, anio dia mamela anao hanaraka safidy vitsivitsy hafa izahay.
Quick Control Panel dia manolotra ny fiasan'ny Center Control an'ny iOS 7 ao amin'ny Android
Miaraka amin'ny Panel Control Quick dia azonao atao ny miasa atolotry ny iOS 7 Control Center amin'ny terminal Android anao
Mandefasa FAX maimaimpoana amin'ny Android-nao
Androany aho te-hampiseho rindranasa tsy misy fitaka na baoritra izay hanampy antsika handefa FAX maimaimpoana amin'ireo terminal Android anay.
Kinova vaovao amin'ny Hangouts misy SMS sy hafatra ao amin'ny chat, widget ary bebe kokoa [Download APK]
Ny kinova Hangouts vaovao dia mitondra hafatra sy SMS natambatra ao anaty varavarankely fifampiresahana, widget iray, feon-kira vaovao hanavahana ny antso an-tsary sy maro hafa
Ny App Config dia manova ny toe-javatra araka ny fampiharana ampiasainao
Tolo-kevitra mahaliana izay entin'ny App Config hanampy anay hanamboatra ny fampiharana tsirairay arakaraka ny safidinao ilaina
Dungeon Pets, tsotra tahaka ny fiankinan-doha
Dungeon Pets no lalao vaovao avy amin'ny GuGames DEV, studio Espaniôla izay miloka amin'ny fifangaroan'ny Pokémon sy Tamagotchi.
Solar Walk for Android dia manaraka ny andian-dahatsoratra vaovao an'i Cosmos an'i Carl Sagan
Solar Walk for Android dia fampiharana tena tsara handehandehanana mamakivaky ny Solar System antsika ary amin'izany hianaranao bebe kokoa momba ny planeta tsirairay
Fanavaozana ny keyboard Fleksy miaraka amin'ny fiteny vaovao sy ny fanohanan'ny DVORAK
Ny fitendry Fleksy dia nanjary safidy matotra ho an'ny keyboard SwiftKey na Swype malaza na Android tenany ihany.
Fanavaozana vaovao ny Kalandrie Google miaraka amin'ny vaovao roa mahaliana [Download APK]
Ny fanavaozana ny Google Calendar dia mitondra fampisehoana vaovao roa manan-danja, ny iray amin'izany dia ahafahanao mandray anjara mivantana amin'ny antso an-tsary any Hangouts
Google mandefa ny Google Camera ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny endri-javatra vaovao [Download APK]
Raha manana fitaovana miaraka amin'ny Android 4.4 KitKat ianao dia manana Google Camera manomboka anio ao amin'ny Play Store
Chrome Remote Desktop dia azo alaina ao amin'ny Play Store ho an'ny olon-drehetra [Download APK]
Chrome Remote Desktop ao amin'ny Play Store mba hidiranao lavitra amin'ny solosainao Android ny solosainao
Frog Browser, tranokala maivana ary mandeha haingana
Eto aho dia avelako ianao ary atoroko ny iray amin'ireo mpizaha tranonkala tsara indrindra ho an'ny Android. Ny anaranao: Brog Browser
Xtreme Wheels, fanamby tena izy
Xtreme Wheels dia lohateny izay mampihetsi-po ny fahatsapana ny fitsapana mahazatra ary mendrika hilalaovana.
Avadiho ho toy ny tena endrik'ilay iPhone an'ny Apple ny Android-nao
Eto ianao dia manana rindranasa 5 ho an'ny Android izay hiaraka hanome antsika ny fisehoan'ny rafitra fiasan'ny iOS izay hamadika ny Android ho Apple iPhone
Retrica dia misy amin'ny Android izao, ny fampiharana iOS malaza amin'ny fanaovana selfie
Retrica amin'ny Android manomboka anio mba haka sary mihetsika tena tsara indrindra, ireo sary izay lamaody
Milalaova pranks tsy mampino amin'ny PC anao amin'ny Android amin'ny PrankPC
Androany aho te hampiseho fampiharana mahafinaritra anao ho an'ny Android izay hanampy anay hilalao hatsikana tsy mampino amin'ny solo-sainay Windows manokana.
Ahoana ny fomba hanesorana ireo apps default amin'ny Android
Amin'ity lesona manaraka ity dia hazavaiko ny fomba marina hanesorana ireo fampiharana tsy misy fampiasa amin'ny terminal Android.
Card Wars, toko iray amin'ny Time Adventure amin'ny endrika lalao
Card War dia toko iray momba ny Adventure Time natao ho lalao video.
Eto ianao dia manana rindranasa maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay hanampy anay hampidina ireo fitsapana fanadinana DGT mivantana amin'ny Android-nay
BitTorrent Sync dia mety ho ny safidy tadiavinao hisolo ny serivisy toa an'i Dropbox mba ho tena tompon'ny rakitrao
Noho ny tranokalan'ny Kickstarter dia afaka mankafy foobar2000 amin'ny Android isika amin'ny faran'ity taona ity
Serivisy fitahirizana rahona 10 ho solon'ny Dropbox
Serivisy fitehirizana rahona 10 izay manolotra safidy mahaliana amin'ny Dropbox, izay miaritra ny fanafoanana kaonty an'arivony.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, anio myMail
myMail dia rindrambaiko fitantanana manan-tsaina sy misy malalaka ho an'ny kaonty mailaka rehetra ho an'ny Android.
Farany: zombie, fiara ary Retro.
Dead End dia lohateny avy amin'ny studio frantsay kely izay, ho an'ny estetika, dia mendrika ny hitsapana azy.
Hover Browser dia mpizaha tranonkala iray misy fitaratra "mitsingevana"
Ny tranonkala Browser hover Browser dia mamela anao hanokatra varavarankely mitsinkafona marobe amin'ny traikefa an-tranonkala tsy manam-paharoa
Kinova vaovao an'ny SoundCloud izay manatsara ny fampiharana amin'ny fomba estetika. Famantarana mozika izay tsy azonao adino
Raha mitady ny tsotra ho tanjonao ianao, indraindray dia tratra ny fahombiazana tsy ampoizina indrindra. Izany no nitranga tamin'ireo lalao Android 3 izay nohalalininay.
Eto aho hitondra anao hampidina Chrome Beta 35 ho an'ny Android, izay raha ny fahitako azy dia ny Internet no Internet browser for our Androids.
Mpandefa ho an'ny Android: Mpandefa necta anio
Necta Launcher dia iray amin'ireo mpandefa Launcher ho an'ny Android mety indrindra ho an'ireo zokinay na ho an'ireo izay maniry Launcher miasa sy mora ampiasaina.
Dropbox dia mandefa an'i Carousel, fampiharana galeriana "sosialy" natokana ho an'ny sary sy horonan-tsary
Carousel dia hiezaka handamina ny sarinao rehetra mba zaraina amin'ny namanao na fianakavianao
Sintomy ny tonon-kira avy amin'ny tranombokinao Android amin'ny musiXmatch
Androany aho te-hamporisika fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android sy iOS izay hanampy anao hisintona ny tonon'ireo hira ao amin'ny tranomboky mozika iray manontolo
Ny kinova vaovao an'ny OneNote an'ny Microsoft ho an'ny Android dia ahafahanao mamorona kahie sy fizarana
Seho vaovao roa no hita ao amin'ny kinova vaovao an'ny OneNote an'ny Microsoft, toy ny famoronana kahie sy fizarana
Fetsy hafa hanavaozana ny WhatsApp maimaim-poana mandritra ny herintaona
Ity misy tetika hafa hanavaozana ny WhatsApp maimaim-poana mandritra ny herintaona.
Sintomy ny FireChat ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo tsy misy fifandraisana
Eto ianao dia manana rohy mivantana handefasana FireChat maimaim-poana amin'ny Android.
Widget Android 3 maimaim-poana izay hanamora ny fiainanao
Ny Widget Android dia manamora ny fidiranay amin'ireo lahasa, fampandrenesana ary safidin'ny fampiharana. Androany izahay dia mamakafaka ny 3 izay tianao hananana.
Karatra fanomezana Google Play ao amin'ny MediaMarkt
Ankehitriny koa izahay dia manana karatra fanomezana Google Play azo alaina ao amin'ny MediaMarkt, ny gadona fitaovana elektronika ao an-trano.